အသက် ၃၀ အောက်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အချက် (၅)ချက် -
အသက် ၃၀ အောက်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အချက် (၅)ချက်
Posted on December 12, 2018 June 26, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
အသက်ငယ်သေးတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးစီးဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုကို တည်ထောင်ချင်ပေမဲ့ အသက်ကလည်း နှစ်ဆယ်ကျော် သုံးဆယ်ကြားပဲ ရှိသေးတာကြောင့် စိတ်ပူနေပြီလား။ ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့ တကယ်က ငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်ဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုစဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်တစ်ခုပါပဲ။ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ အသက် ၃၀ အောက်အရွယ်တွေအတွက် စီးပွားရေးတစ်ခုစဖို့ ဘာတွေသိထားသင့်လဲဆိုတာ အက်ဒ်မင် ပြောပြမယ်နော်။
၁။ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အရင်သိအောင်ကြိုးစားပါ။
လူတိုင်းက ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အရင်သိအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ အသက် ၃၀ အောက် လူငယ်အများစုရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အတွေ့အကြုံနည်းတာပါ။ ဒီတော့ ဒီအားနည်းချက်ကို အနိုင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် တခြားအားသာချက်တွေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းရမှာပါ။
ကိုယ့်မှာ အတွေ့အကြုံမရှိရင် အတွေ့အကြုံရှိသူနဲ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်တာ၊ ကိုယ့်ကို နည်းပေးလမ်းပြလုပ်နိုင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆည်းကပ်တာ ဒါမှမဟုတ် အသိပညာ နဲ့ စာတွေ့တွေ များများရှိလာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
၂။ စာရင်းဇယား နိုင်နင်းပါစေ။
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုရဲ့အသက်ဟာ စာရင်းဇယားပါပဲ။ လုပ်ငန်းရှင်ကလည်း တော်တယ်၊ အလုပ်လည်း ဖြစ်တယ်၊ ငွေတွေလည်း ဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့ စာရင်းဇယား မနိုင်နင်းတာကြောင့် ကျဆုံးသွားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးပါ။
ကိုယ်တိုင် စာရင်းအင်းပညာ မကျွမ်းကျင်ရင်တောင် အခြေခံလောက် သိနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ စာရင်းဇယား ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကို ငှားရမ်းကာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ စာရင်းတွေကို တာဝန်ယူခိုင်းပြီး ကိုယ်တိုင်က မကြာမကြာ စစ်ဆေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
Related Article >>> အသက်သုံးဆယ်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်း (၅)ခု
၃။ စွန့်စားဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။
လူကြီးတွေမှာ မရှိတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုက စွန့်စားလိုစိတ်ပါပဲ။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အပြင် ငဲ့ကွက်စရာလည်း မရှိလေတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး ရှိကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီစိတ်ဓာတ်လေး မပျောက်ပျက်ပါစေနဲ့။
စွန့်စားဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ အကယ်၍ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ အမှားတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်တွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။
လူငယ်တွေဆိုတော့ ဘာမဆို လုပ်လိုက်မယ်၊ ကိုင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တက်ကြွကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အလောတော့ မကြီးစေချင်ပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာနဲ့ အချိန်တွေ ငွေတွေ ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လေ။ ဘာပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချချ သေသေချာချာ အချိန်ယူစဉ်းစား၊ သိနားလည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ မမှားပါဘူး။
Related Article >>> ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုစတင်ဖို့ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲ
၅။ ဒါဟာ အဆုံးသတ် မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေပိုများမှာပေါ့။ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတာလေ။ ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ ငါတော့သွားပြီ ဆိုတဲ့အတွေးက ကိုယ့်ကိုဖိစီးနေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့လေ။ အဲဒီလို ဖိစီးမှု များတာက မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမိစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ထဲမှာ ဒီလို အတွေးလေး တွေးထားလိုက်ပါ။ ဒီလုပ်ငန်း အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ဆုံးရှုံးသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ကတော့ ရှိနေမှာပါ။ (သေမသွားပါဘူး) အသက်ရှင်နေသမျှ နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားခွင့်ရှိတာပဲလေ။ ငွေကြေးအားဖြင့် အမြတ်အစွန်း မရရင်တောင် အသိပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေက ကိုယ့်အတွက် အမြတ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်ကို ဖယ်ရှားပြီး ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အရာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်လိုက်ပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် အသက် ၃၀ အောက်လူငယ်တွေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ ခွန်အားတွေရသွားကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကနေ တစ်ဆင့် အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအဖြစ် တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ….
References : .businessinsider, moneyunder30
အသကျငယျသေးတော့ လုပျငနျးတဈခုကို ဦးစီးဖို့ ဖွဈနိုငျပါ့မလား စိုးရိမျနကွေသူမြားအတှကျ
ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတဈခုကို တညျထောငျခငျြပမေဲ့ အသကျကလညျး နှဈဆယျကြျော သုံးဆယျကွားပဲ ရှိသေးတာကွောငျ့ စိတျပူနပွေီလား။ ဘာမှ စိတျမပူပါနဲ့ တကယျက ငယျရှယျတုနျးအခြိနျဟာ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတဈခုစဖို့ အကောငျးဆုံး အခြိနျတဈခုပါပဲ။ လုပျငနျးရှငျဖွဈအောငျ ကွိုးစားမယျလို့ လုံးဝဆုံးဖွတျခကျြခပြွီးပွီဆိုရငျတော့ အသကျ ၃၀ အောကျအရှယျတှအေတှကျ စီးပှားရေးတဈခုစဖို့ ဘာတှသေိထားသငျ့လဲဆိုတာ အကျဒျမငျ ပွောပွမယျနျော။
၁။ ကိုယျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြကို အရငျသိအောငျကွိုးစားပါ။
လူတိုငျးက ဘာပဲလုပျလုပျ ကိုယျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြကို အရငျသိအောငျ ကွိုးစားရပါမယျ။ အသကျ ၃၀ အောကျ လူငယျအမြားစုရဲ့ အားနညျးခကျြကတော့ အတှအေ့ကွုံနညျးတာပါ။ ဒီတော့ ဒီအားနညျးခကျြကို ထနေိုငျဖို့အတှကျ တခွားအားသာခကျြတှနေဲ့ ဖွညျ့ဆညျးရမှာပါ။
ကိုယျ့မှာ အတှအေ့ကွုံမရှိရငျ အတှအေ့ကွုံရှိသူနဲ့ လကျတှဲအလုပျလုပျတာ၊ ကိုယျ့ကို နညျးပေးလမျးပွလုပျနိုငျမယျ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဆညျးကပျတာ ဒါမှမဟုတျ အသိပညာ နဲ့ စာတှတှေ့ေ မြားမြားရှိလာအောငျ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။
၂။ စာရငျးဇယား နိုငျနငျးပါစေ။
လုပျငနျးခှငျတဈခုရဲ့အသကျဟာ စာရငျးဇယားပါပဲ။ လုပျငနျးရှငျကလညျး တျောတယျ၊ အလုပျလညျး ဖွဈတယျ၊ ငှတှေလေညျး ဝငျတယျဆိုပမေဲ့ စာရငျးဇယား မနိုငျနငျးတာကွောငျ့ ကဆြုံးသှားတဲ့ လုပျငနျးတှေ အမြားကွီးပါ။
ကိုယျတိုငျ စာရငျးအငျးပညာ မကြှမျးကငျြရငျတောငျ အခွခေံလောကျ သိနားလညျထားသငျ့ပါတယျ။ စာရငျးဇယား ကြှမျးကငျြသူတဈယောကျကို ငှားရမျးကာ ကိုယျ့လုပျငနျးရဲ့ စာရငျးတှကေို တာဝနျယူခိုငျးပွီး ကိုယျတိုငျက မကွာမကွာ စဈဆေးနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါ။
Related Article >>> အသကျသုံးဆယျအရှယျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျမေးသငျ့တဲ့မေးခှနျး (၅)ခု
၃။ စှနျ့စားဖို့ ဝနျမလေးပါနဲ့။
လူကွီးတှမှော မရှိတဲ့ လူငယျတှရေဲ့ အားသာခကျြတဈခုက စှနျ့စားလိုစိတျပါပဲ။ ငယျရှယျသေးတဲ့အပွငျ ငဲ့ကှကျစရာလညျး မရှိလတေော့ ဖွဈခငျြရာဖွဈ ငါလုပျမယျဆိုတဲ့ စိတျကလေး ရှိကွပါတယျ။ ဒါဟာ ကောငျးတဲ့အခကျြပါ။ ကိုယျပိုငျ စီးပှားရေးလုပျမယျဆိုရငျ ဒီစိတျဓာတျလေး မပြောကျပကျြပါစနေဲ့။
စှနျ့စားဖို့ ဝနျမလေးပါနဲ့။ အကယျ၍ ရှုံးနိမျ့မှုတှေ၊ အမှားတှေ ရှိတယျဆိုရငျတောငျ ပွငျဆငျဖို့ အခြိနျတှေ အမြားကွီး ကနျြပါသေးတယျ။
လူငယျတှဆေိုတော့ ဘာမဆို လုပျလိုကျမယျ၊ ကိုငျလိုကျမယျဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ တကျကွှကွတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အလောတော့ မကွီးစခေငျြပါဘူး။ ဆုံးဖွတျခကျြမှားတာနဲ့ အခြိနျတှေ ငှတှေေ ဆုံးရှုံးနိုငျတယျလေ။ ဘာပဲ ဆုံးဖွတျခကျြခခြ သသေခြောခြာ အခြိနျယူစဉျးစား၊ သိနားလညျသူတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီးမှ ဆုံးဖွတျခကျြခတြာ မမှားပါဘူး။
Related Article >>> ကိုယျပိုငျအလုပျတဈခုစတငျဖို့ စိုးရိမျစိတျတှကေို ဘယျလိုကြျောဖွတျကွမလဲ
၅။ ဒါဟာ အဆုံးသတျ မဟုတျပါဘူး။
ကိုယျပိုငျလုပျငနျးဆိုတော့ စိုးရိမျစိတျတှပေိုမြားမှာပေါ့။ အခြိနျတှေ၊ ငှတှေရေငျးနှီးမွှုပျနှံထားရတာလေ။ ဆုံးရှုံးသှားရငျတော့ ငါတော့သှားပွီ ဆိုတဲ့အတှေးက ကိုယျ့ကိုဖိစီးနနေိုငျပါတယျ။ စိတျမပူပါနဲ့လေ။ အဲဒီလို ဖိစီးမှု မြားတာက မှားယှငျးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြိစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ စိတျထဲမှာ ဒီလို အတှေးလေး တှေးထားလိုကျပါ။ ဒီလုပျငနျး အောငျမွငျသညျဖွဈစေ ဆုံးရှုံးသညျဖွဈစေ ကိုယျကတော့ ရှိနမှောပါ။ (သမေသှားပါဘူး) အသကျရှငျနသေမြှ နောကျတဈကွိမျကွိုးစားခှငျ့ရှိတာပဲလေ။ ငှကွေေးအားဖွငျ့ အမွတျအစှနျး မရရငျတောငျ အသိပညာတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှကေ ကိုယျ့အတှကျ အမွတျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ စိုးရိမျစိတျကို ဖယျရှားပွီး ကိုယျလုပျရမယျ့ အရာတှကေို အကောငျးဆုံး လုပျလိုကျပါ။
ဒီလောကျဆိုရငျ အသကျ ၃၀ အောကျလူငယျတှေ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတဈခုတညျထောငျဖို့ ခှနျအားတှရေသှားကွမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒီလုပျငနျးကနေ တဈဆငျ့ အောငျမွငျတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျကွီးတှအေဖွဈ တကျလှမျးနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး ….
References : businessinsider, moneyunder30
Tagged business-lady, Career, Enterprise, entrepreneur, Job
Posted on May 25, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
Posted on July 31, 2018 August 1, 2018 Author Wathun
ကိုယ့်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အလုပ်သင် အခွင့်အရေးရရှိအောင် ဘယ်လို ရွေးချယ်ကြမလဲ?
Posted on October 22, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar
သားသမီးကို ချုပ်ချယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်များ
ကိုယ့်ချစ်သူကို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက မုန်းတီးနေရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?